Soo dejisan Steam 2.0.32 – Android – Vessoft
Soo dejisan Steam
Steam – codsi ku anfacaya in ay la xiriiraan iyo orodada ee closeouts of kulan oo ka tirsan shirkadda waalka. Software ayaa u saamaxaaya in ay baadhaan, iibsadaan oo u eegto macluumaadka ku saabsan ciyaarta. Steam kuu ogolaanayaa inaad la socoto waxa kulan aad saaxiibo yihiin ciyaaro iyo hadal iyaga qolalka chat. Software ayaa sidoo kale u saamaxaaya in ay ula socdaan wararka muhiim ah oo ka mid ah kubada cagta caalamka, updates, dhimis iyo dalacsiinta.
U qor saaxiibo qolalka chat
Awoodda ay u soo iibsadaan kulan
Leysu updates news, dhimis iyo dalacsiinta
Comments on Steam:
Steam Software la xiriira:
Games ciyaar door-ciyaareed The meesha aad ka raadin kartaa oo qaadi Pokemon on jidadka magaalada iyada oo la isticmaalayo camera ah ee casriga ah. Ciyaarta ayaa awood u leh inay isgaadhsiin oo ay kula tartanto ciyaartoyda kale.
English, Deutsch, 中文, Русский... Humble Bundle 2.1.2
العربية, English, Українська, Français... OpenVPN 1.1.16